आफन्तकै छैन भर - SangaloKhabar
आफन्तकै छैन भर
०७४/७५ मा १ हजार ६ सय ७४ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भए। तीमध्ये १ हजार २ सय ९० वटामा चिनेजानेकै व्यक्ति संलग्न भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। ३ सय ८४ वटामा चिनजानबाहिरका व्यक्ति संलग्न देखिए।
०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ७० वटा घटना भए। तीमध्ये २ हजार ७३ वटामा चिनेजानेकै र ५ सय ३२ वटा बाहिरका व्यक्तिको संलग्नता भेटियो।
०७६/७७ मा २ हजार ४ सय ४९ वटा घटना भए। प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार १ हजार ९ सय ५२ वटामा चिनजानकै व्यक्तिको संलग्नता पाइयो। बाँकी घटना चिनजान नभएका व्यक्तिले गराएको प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ।
चालु वर्षको पुससम्म १ हजार ४ सय २७ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। यी घटनामा पनि चिनेजानेकै व्यक्ति बढी संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता कुँवरका अनुसार यो तथ्यांक हेर्दा १ हजार १ सय ४३ घटनामा चिनेजानेकै र २ सय ८४ वटामा चिनजान नभएका व्यक्ति संलग्न देखिएका छन् ।
हाडनाताभित्र पर्ने हजुरबुबा, बुबा/झड्केलो बुबा, ससुरा, काका, मामा, ठूलोबुवा, ठूलोबुवाका छोरा, मामाका छोरा, देवर, जेठाजु, श्रीमान्, भदासम्म बलात्कारमा संलग्न रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी घरमालिक, केटासाथी, छिमेकी, भिनाजु, शिक्षक पनि संलग्न देखिन्छन्।
नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रमबाट हटेपछि व्यक्तिले नैतिक ज्ञान, समाज के हो ? समाजमा कसरी बस्नुपर्छ ? जस्ता ज्ञानवद्र्धक कुरा विद्यालयस्तरबाटै सिक्ने मौका गुमाएको चेम्जोङ बताउँछन्।
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता कुँवर प्रहरी–समुदाय साझेदारी कार्यक्रममार्फत चेतना अभिवृद्धि गराउँदा पनि समाज अझै रुपान्तरण हुन नसकेको बताउँछन्। ‘हामीले बलात्कार मात्रै होइन, महिला, बालबालिकाविरुद्ध आपराधिक घटना हुन नदिन धेरै पटक गाउँ–गाउँमा पनि सम्झाउने बुझाउने गरिसक्यौं’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘तर, घटना रोकिएको छैन। न्यूनीकरण भने भएको छ।’ – सुवास गोतामेले लेखेको यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १०, २०७७ समय: ७:२३:१४